ဒေါင်လိုက်ကြိတ်စားပွဲပေါ်မှာအလေးချိန်: 20-150T သက်ဆိုင်သော device ကို: ဒေါင်လိုက်စက်များ, ဓာတ်သတ္တု slag ဒေါင်လိုက်စက်များ, ဘိလပ်မြေဒေါင်လိုက်စက်များ, သံမဏိ slag ဒေါင်လိုက်စက်များ, နီကယ် slag စက်များ, ကုန်ကြမ်းဒေါင်လိုက်စက်များနှင့်ကျောက်မီးသွေးဒေါင်လိုက်စက်များ။ လျှောက်လွှာ: ဘိလပ်မြေ, ပစ္စည်း, ဓာတု, ကျောက်မီးသွေး, လျှပ်စစ်, သတ္တုဗေဒမဟုတ်သောသတ္တုမိုင်းများနှင့်အခြားသူများကိုစိတ်ကြိုက်တည်ဆောက်ခြင်း: ဟုတ်ကဲ့အဓိကပစ္စည်းများ: ရိုးရိုးကာဗွန်သံမဏိ, Si-MN သံမဏိနိဒါန်းစက်စားပွဲပေါ်မှာဘိလပ်မြေဒေါင်လိုက်ကြိတ်နှင့် slag ဒေါင်လိုက်ကြိတ်၏အရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ကြိတ်စက် ...
သက်ဆိုင် device ကို: ဒေါင်လိုက်စက်များ, ဓာတ်သတ္တု slag ဒေါင်လိုက်စက်များ, ဘိလပ်မြေဒေါင်လိုက်စက်များ, သံမဏိ slag ဒေါင်လိုက်စက်များ, နီကယ် slag စက်များ, ကုန်ကြမ်းဒေါင်လိုက်စက်များနှင့်ကျောက်မီးသွေးဒေါင်လိုက်စက်များ။
လျှောက်လွှာ: ဘိလပ်မြေ, ပစ္စည်းကိုတည်ဆောက်ခြင်း, ဓာတု, ကျောက်မီးသွေး, လျှပ်စစ်, သတ္တုဗေဒမဟုတ်သောသတ္တုမိုင်းများနှင့်အခြားသူများကို
လွင်ပြင်ကာဗွန်သံမဏိ, Si-MN သံမဏိ
ကြိတ်စားပွဲပေါ်မှာဘိလပ်မြေဒေါင်လိုက်ကြိတ်နှင့် slag ဒေါင်လိုက်ကြိတ်၏အရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ကြိတ်စားပွဲပေါ်မှာခုခံကွင်းဆက်, ကှနျ့ပန်းကန်များနှင့်စစ်စခန်းများပါဝင်ပါသည်။ ။ ဆိုဒီယမ် silicates-ကပ်လျက်တည်ရှိသဲ - ရှန်ဟိုင်းအထူး Metal, LTD ကြိတ် table ၏နည်းပညာကို ချ. ကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေ, အများဆုံးအဆင့်မြင့်တန်ဆာသက်ဆိုင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏နည်းပညာရိုးရာနည်းလမ်းများ၏ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံချို့ယွင်းချက်အောင်မြင်သော။ အားသာချက်များကိုကြိတ် table ၏အခြေစိုက်စခန်းတစ်ပုံစံတည်းအလေးပေးဖြစ်ပါတယ်ပါ၏ ကြိတ်စားပွဲနှင့်ကြိတ်စက်ကြိတ်စက်အကြား nip ထောင့်အဘယ်သူမျှမ wear-ခုခံမျက်နှာ၏ပုံကြီးချဲ့, ကောင်းသော Anti-ချေးဖြစ်ပါတယ်။
ရှန်ဟိုင်းအထူးသတ္တု CO ။ , LTD မှအရည်အသွေးကောင်းဒေါင်လိုက်ကြိတ်ကြိတ်စက်, ကြိတ်စားပွဲ, ဆွန်းရိုးတံ, ကြီးမားတဲ့လက်စွပ်ဂီယာနှင့်စီးနင်းဘီးထုတ်လုပ်ဤအစိတ်အပိုင်းကောင်းစွာပင်လယ်ရပ်ခြားစျေးကွက်ကလက်ခံကြသည်။
ရှန်ဟိုင်းအထူးသတ္တု CO ။ , LTD မှ GRM စီးရီးဒေါင်လိုက်ကြိတ်စားပွဲနှင့်အခြားအမှတ်တံဆိပ် / မော်ဒယ်များဒေါင်လိုက်စက်များအမျိုးအစားအားလုံးကိုအပါအဝင်စိတ်ကြိုက်ကြိတ်စားပွဲပေါ်မှာအမျိုးမျိုးတို့ကို, ပေးပါသည်။ ကျနော်တို့ကောင်းသောအရည်အသွေးနှင့်တွေ့ကြံ client များ '' တောင်းဆိုချက်တွေအာမခံပါသည်။
1. အမြင့်ခိုင်မာသော, Anti-ကွဲအက်, ခံနိုင်ရည်, ချောလက်ရာဝတ်ဆင်
2. Arc လေကြောင်းဒေါနှင့်ပစ်ခတ်ပေါက်ကွဲမှုကြောင့်သေချာကောင်းသောပုံပန်းသဏ္ဌာန်အရည်အသွေးကိုစေရန်, သံမဏိ '' ပြီး ချ. ရန်အသုံးပြုကြသည်။
3. NDE စစ်ဆေးခြင်းထုတ်ကုန်စစ်ဆင်ရေးအတွက်စိတ်ဖိစီးမှုစွမ်းရည်နှင့်တည်ငြိမ်၌ကောင်းသောဖြစ်ကြောင်းသေချာစေရန်, ပို့ဆောင်မှုမပြုမီစိတ်ဖိစီးမှုမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်အသုံးချနေကြသည်။
ယခင်: rotary လညျးမီးဖို, ဘောလုံးကိုကြိတ်နှင့်ပြွန်ကြိတ်များအတွက် girth ဂီယာ
rotary လညျးမီးဖို, ဘောလုံးကိုမိုင်အဘို့အ girth ဂီယာ ...